Olee otú ị ga-esi kwụsị spam ndị China site na iju mmiri gị iPhone? Ntuziaka Site na Ụlọ elu
Ma eleghị anya, ị maara uru itinye ederede siri ike ma rụọ ọrụ nyochapụta ihe abụọ (2FA) na ngwaọrụ Apple gị. A na-ezigara ọtụtụ narị puku ozi Spam na-abaghị uru na ngwaọrụ iPhone. Ihe ndekọ iMessage ahụ a na-ekpuchi nwere ike jupụta iPad gị, iPhone, Mac ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya na ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na gobbledygook karịa ka ị nwere ike iche n'echiche. N'ikwu okwu na ụzụ, ọ bụghị mbanye anataghị ikike kama ọ bụ ihe ịrịba ama na mmadụ echepụtala paswọọdụ gị ma jiri ngwaọrụ gị maka ọrụ nzuzu ya - mark logic user.
Andrew Dyhan, onye ọkachamara kachasị elu Semalt , edepụtawo ihe ndị bara uru bụ ndị ga - enyere gị aka ịnọ n'enweghị nsogbu site na ọgụ ndị dị otú a.
Ọtụtụ ndị ọrụ ejiriwo atụmatụ ndị dị otú ahụ na-adaba. Otu ụlọ ọrụ nchebe nke ndị Britain na-ebipụta na Sophos bipụtara otu post na Naked Security blog, ebe ọ na-akọrọ ahụmahụ nke ndị ọrụ iPhone dị iche iche. Otu n'ime ndị ọrụ ahụ kwuru na e jiri iPhone mee ihe n'ụzọ iwu na-akwadoghị iziga ozi ndị China na-adịghị na ya na ndị enyi ya na ndị òtù ezinụlọ ya. Enweghị akụkọ banyere akụkọ data ahụ, ọ dịghịkwa ụzọ ị ga-esi wepụ paswọọdụ onye si na ngwaọrụ iOS ya. N'ọnọdụ dị otú a, ọ gaghị ekwe omume ka onye ọ bụla kwuo ihe na-eme, ma Apple Inc. amalitela John Munn si na Belfast chịkọta nsogbu ahụ, na-azọrọ na ndị ọrụ Android na-eme mkpesa banyere okwu a ruo ọtụtụ afọ..A na-echebara otutu okwuntughe okwuntughe, a na-echekwa ihe ndekọ kwa ụbọchị. Ọ bụghị naanị John ka a na - eme ka Sophos nyochaa okwu ahụ ma chọpụta na Apple anataghị mkpesa banyere nchọpụta ya ma dozie ọtụtụ nsogbu.
Olee otú ọrụ mwakpo ahụ si eme?
Nke mbụ, ndị ọrụ na-enweta ozi na-ekwu na ha enwetawo ID ID ha site na ebe ma ọ bụ ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị nweta ọkwa dị otú ahụ na kọmputa gị, ọ nweghị ihe ị nwere ike ime. Mana ọ bụrụ na ịnata ozi dị otú ahụ na ekwentị mkpanaka gị, ị kwesịrị ịpị bọtịnụ OK. N'ụzọ ọ bụla, ozugbo a natara ozi mbụ ahụ, iju mmiri ahụ ga-amalite. A na-enyocha ọtụtụ ngwaọrụ dị kwa ụbọchị. Ndị ọrụ na-eme mkpesa banyere emojis na ederede sitere na isi mmalite isi, na ozi ndị ahụ ka edere ya n'asụsụ Chinese.
A na-eziga otu ụdị ozi ndị ahụ na ọtụtụ puku ndị mmadụ sitere na akaụntụ oria. Ọ bụrụ na ị sụgharịa ozi ndị ahụ, ha nwere ike ịtuga gị na ụlọ ịgba chaa chaa ma ọ bụ ụlọ ịgba egwu na Macau. Enwere ohere na ndị na-agba ọsọ na-ezu ohi ozi gị site na iji aha nke casinos mara mma, mana omume ndị dị otú ahụ ga-eduga n'ọdụ mmiri nke spam. Ọ bụrụ na ọ na-ekwu "ozi ndị ọzọ," nke ahụ pụtara na ndị na-awakpo ahụ enwetawo paswọọdụ gị ma ọ bụ na ịmepụta data gị iji mebie iwu ụfọdụ na ntanetị. Apple na-ekwu na ọ gaghị ekwe omume ịnweta akaụntụ iMessage nke onye ọrụ, ma ndị na-agba ọsọ na-emekarị ndị ọrụ aghụghọ ma na-emegharị ha ka ha bụrụ ihe mkpofu na-enweghị atụ. Ohere ndị onye ọrụ ahụ mebiri okwu okwuntughe ha na ụfọdụ data data, dika LinkedIn na Yahoo. Ha nwere ike iji otu paswọọdụ ahụ maka akụkọ dị iche iche, na-ekwe ka ndị na-agba ọsọ na-ejikọ ID dị iche iche email na otu paswọọdụ ahụ. N'ikpeazụ, ị ga-eji okwuntughe okwuntughe nke nwere ike ghara ịkọwa site na hackers. Ịkwesịrị imelite okwuntughe gị ugboro ugboro ma mee ka 2FA rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu gbasara nchekwa nke akaụntụ gị, ị ga-elele aro Apple.